Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Fibreerka ah | Shiinaha Fiber indhaha Accessories Warshad
Fiber gudbiye indhaha
1550nm Qalabaynta Qalabka Fududeeyaha Dibadda
1550nm Gudbinta Gudaha Gudbinta indhaha
1310nm gudbiye indhaha
Bannaanka gudbiye indhaha
Mini gudbiye indhaha
Kordhiye Fibre indhaha
Erbium Doped Fiber Kordhiyaha (EDFA)
Awoodda Wax Soo Saarka Sare EDFA
Kordhiye Awood Soo Saar Sare leh CWDM (EYDFA)
Raman Optical kordhiye
Module EDFA caqli badan
Dibadda Fiber indhaha kordhiyo
Aqbalana Fibre indhaha
FTTH Qaataha indhaha
FTTB Qaataha indhaha
Raadiyaha Aragtida RFoG
Node Fibre Optical Node
Node indhaha gudaha
Bannaanka indhaha banaanka
SAT-IF CATV Gudbinta
Soo-gudbiyaha Muuqaalka Satalaytka
Aqbalana Satalaytka indhaha
PON Iyo EOC
CATV Wareejinta Coaxial Cable
Gudaha Kordhinta Kabadhka Gudaha
Bannaanka Coaxial Cable Amplifier
Tubada Oo kala
Beddelaha Ethernet Media
10M / 100M Beddelaha Warbaahinta
1000M Beddelaha Warbaahinta
SFP Beddelaha Warbaahinta
Module Transceiver SFP
Wareejinta Warshadaha / POE +
Qalabka Imtixaanka Iyo Qalabka
Mitirka Aaladda Fudud
Meter Awoodda Aragtida PON
Mashiinka Flic Splicer
Muuqaalka Cilad Muuqaalka (VFL)
Isha Laser indhaha
Tijaabiyaha Lumida indhaha
Attenuator Isbedbeddelaya Aragtida
Mitirka Heerka Calaamadaha
Module Magdhowga Firfircoonida (DCM)
Fibre optical optical
Cajalad Nooca Kala
Kala-jajabinta Mount Mount
Qalabka Fibre indhaha
Nidaamka Fiber Optic Patch Cord
Multimode Fibre Optic Patch Cord
FTTA CPRI Xadhig Fibre Dibedda ah
Isku xira indhaha
Sanduuqa Fibre Optical Terminal
Xiritaanka Fibre Optical
Qalabka TV-ga Dijital ah
1550nm Isbedelka Dibadda ...
Mini gudbiye indhaha (Z ...
Heerka Dhexe ee Helitaanka EDFA (ZOA ...
ZHR1000SD FTTH Heer Sare O ...
FC Fibre Optical Pigtail
Fiber optic pigtails wuxuu bixiyaa hab dhakhso leh oo loogu sameeyo aaladaha isgaarsiinta berrinka. Waxaa loo qaabeeyey, la soo saaray lana tijaabiyey iyadoo loo eegayo hab maamuuska iyo waxqabadka ay soo saaraan heerarka warshadaha, kuwaas oo la kulmi doona farsamooyinkaaga iyo farsamooyinka aad u adag ee adag. Muuqaalka 1. Wax soo saarku wuxuu qaataa biinanka dhoobada laga soo dhoofiyo wuxuuna soo dejiyaa fiilooyinka fiber optic tayo sare leh. 2. Soo bandhig tikniyoolajiyad shiidan oo shisheeye ah iyo qalabka wax lagu shiido si loo hubiyo in weecinta xudduudda fibe ...
LC Fibre Optic Pigtail
Fiber optic pigtails wuxuu bixiyaa hab dhakhso leh oo loogu sameeyo aaladaha isgaarsiinta berrinka. Waxaa loo qaabeeyey, la soo saaray lana tijaabiyey iyadoo loo eegayo hab maamuuska iyo waxqabadka ay soo saaraan heerarka warshadaha, kuwaas oo la kulmi doona farsamooyinkaaga iyo farsamooyinka aad u adag ee adag. Isku xiraha isku xiraha isku xiraha LC isku xiraha B Fiber Mode 9 / 125μm Fiber Nooca Simplex Polish APC Cable Ballaca 0.9mm Jaakada Waxyaabaha PVC Jaakada Midabka Jaalle Wavelength 1310nm / 1550nm Dulqaadka> ...
Fiber optic pigtails wuxuu bixiyaa hab dhakhso leh oo loogu sameeyo aaladaha isgaarsiinta berrinka. Waxaa loo qaabeeyey, la soo saaray lana tijaabiyey iyadoo loo eegayo hab maamuuska iyo waxqabadka ay soo saaraan heerarka warshadaha, kuwaas oo la kulmi doona farsamooyinkaaga iyo farsamooyinka aad u adag ee adag. Nooca isku xira Nooca isku xira FC Polish Nooca UPC / APC Fiber Mode OS2 9 / 125μm Wavelength 1310 / 1550nm Fibre Tirinta Fudud Fudud Fasalka G.652.D / G.657.A1 Galinta Loss ≤0.3dB Soocelinta Khasaaraha UPC≥50dB, APC≥60dB Atte ...
Qalabkan 'St Single Mode Patch Cord' waa mid ka mid ah isku xirayaasha taxanaha MT. Wareegyada taxanaha waxay adeegsadaan laba god oo hage ah oo dhexroor ku leh wejiga dhammaadka cirifka iyo jihada hagaha isku xidhka saxda ah. Intaa waxaa dheer, waa laga shaqeyn karaa si loo soo saaro noocyo kala duwan oo boodboodiyeyaal ah. Naqshadeynta isku-dhafan ee isku xiraha ayaa u oggolaanaya boodboodka inuu haysto tiro badan oo udub dhexaad ah iyo cabbir yar. Dhinaca kale, Xadhiggan 'Single Single Patch Cord' waxaa si weyn loogu isticmaali karaa bey'ad isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan ...
Habka Keliya Si Loo Multimode Fiber Patch Cord
Qaabkan keli ah ee loogu talagalay fiilada dhejiska ah ee loo yaqaan 'multimode fiber patch cord' waxaa si gaar ah loogu talagalay in laga sameeyo xargaha balastarka qalabka ilaa iskuxirka fiilooyinka fiber optic. Lakabkaan adag ee kahortaga guud ahaan waxaa loo isticmaalaa isku xirka udhaxeeya qalabka wax lagu wareejiyo iyo sanduuqa terminalka. Marka la barbardhigo xadhigga caadiga ah ee suuqa, qaabkeenna keliya ee loo yaqaan 'multimode fiber patch cord' waxaa lagu qalabeeyaa faa'iidada soo noqnoqoshada wanaagsan, waxqabadka isku xidhka wanaagsan iyo xasilloonida heerkulka wanaagsan. Dhinaca kale, waxay sidoo kale reali ...
SC ilaa SC Single Mode Patch Cord
Xariggan balastarka halbeegga ah ee loo yaqaan 'SC to SC single mode patch cord' wuxuu ka kooban yahay laba god oo hagitaan ah oo dhexroor ku leh wejiga dhammaadka xarkaha iyo pin hagaha ee isku xirnaanta saxda ah. Runtii way fududahay in la rakibo mana jirto baahi gaar ah oo loo qabo dayactirka. Intaa waxaa sii dheer, waa laga shaqeyn karaa si loo soo saaro noocyo kala duwan oo ka mid ah boorarka MPO. Ku qalabaysan geedi socod horumarsan, SC-ga SC oo ah hal xarig oo hal balastar ah ayaa si ballaaran loogu isticmaali karaa bay'ada xarigga fiber-optic ee isku dhafan ee habka fiilooyinka, hubinta hawlgalka xawaaraha sare. O ...
SC ilaa LC Single Mode Patch Cord
Xariggan balastar-ka ah ee loo yaqaan 'SC to LC single mode patch cord' wuxuu ku xiran yahay nidaamka gudbinta muraayadaha, kaas oo ogaanaya shaqada isgaarsiinta iyadoo la adeegsanayo isku xirnaanta indhaha, mana jiraan wax ku jira qaabka calaamadeynta calaamadaha. Marka la barbardhigo xarigga caadiga ah ee suuqa, SC-ga illaa LC xarig hal balastar hal balastar leh wuxuu leeyahay faa iidooyinka bixinta gudbinta xogta daahsoon oo aad u hooseeya iyo taageeridda koronto aad u ballaaran oo ballaaran. Ku qalabaysan difaac awood oo aad u fiican iyo shumis toos ah, waxay taageertaa Ult ...
MTRJ ilaa MTRJ Fiber Optic Patch Cord
Xariggan MTRJ ilaa MTRJ Patch Cord wuxuu ku qalabeysan yahay qaab dhismeed difaac ah, kaas oo ogaanaya shaqada si looga hortago waxyeellada deegaanka ku hareeraysan ee fiber optic ah, sida biyaha, dabka, shoogga korantada, iwm. Fiberka multimode, xudunta waxay leedahay dhexroor, kaasoo qiyaas ahaan u dhigma dhumucda timaha aadanaha. Halbeegga halbeegga fiber-ka ayaa leh dhexroor. Banaanka xudunta waxaa ku wareegsan baqshad muraayad ah oo leh tusmo hoose ...
LC ilaa LC Single Mode Fiber Patch Cord
LC-kan iyo LC halbeegga xarigga balastarka halbeegga ah wuxuu noqon karaa xarun ku habboon isku xirka qaab-dhismeedka qaybinta fiilada muraayadaha indhaha iyo isha macluumaadka isha ee biiro, xiriirka ka dhexeeya furayaasha, xiriirka ka dhexeeya furaha iyo kumbuyuutarka, iyo xiriirka ka dhexeeya godka macluumaadka indhaha iyo kumbuyuutarka. Ku qalabaysan waxqabad sare, LC-ga LC xarig hal xarig balastar halbeeg ah ayaa lagu dabaqi karaa nidaamka maareynta. Cabirka saxda ah iyo culeyska fudud awgeed, ...
Xadhiggan LC Single Mode Patch Cord wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay cimilada sare ee cufnaanta. Marka la barbardhigo xarigga caadiga ah ee suuqa, xariggan waxaa lagu qalabeeyaa isku-xiraha aadka u yar-yar, kaas oo keydiya meelo badan marka la barbar dhigo kaabbadda caadiga ah oo aan wax saameyn ah ku yeelan jiidista. Guntinta badhida iskuxiraha yar-yarna way ka gaaban tahay xirmada dabada isku xira LC-ga caadiga ah, taas oo keydineysa meel badan oo loogu talagalay maareynta golaha wasiirrada. Waxqabadka sare awgood, LC Single Mode Patch Cord wuxuu leeyahay mid gaaban ...
· Wuxuu la kulmaa EIA / TIA 604-2 oo leh shey dhoobada dhoobada ah ee shabakadaha kaabeyaasha xawaaraha sare leh. · Cable daabacan wuxuu caawiyaa cadeynta iyo aqoonsiga fiilooyinka kala duwan. · Zirconia Ceramic Ferrule Optimum IL iyo RL. Xadhig fiilada xasaasiga ah ee xasaasiga ah waxay muujineysaa waxqabad weyn oo ku saabsan adkeysiga. Xirmada kartoonka K = K waxay ku siineysaa ilaalin badan waxyaabahaaga. Faahfaahinta isku xira FC ilaa Jaakada FC OD 1.6 / 1.8 / 2.0 / 3.0mm Fiber Mode 9 / 125μm Jaakada Midabka Jaalaha Nadiifinta APC ilaa APC Jaakada Waxyaabaha PVC (OFNR), OFN ...
ST ilaa ST OM3 Cord Cord
· Wuxuu la kulmaa EIA / TIA 604-2 oo leh shey dhoobada dhoobada ah ee shabakadaha kaabeyaasha xawaaraha sare leh. · Cable daabacan wuxuu caawiyaa cadeynta iyo aqoonsiga fiilooyinka kala duwan. · Zirconia Ceramic Ferrule Optimum IL iyo RL. Xadhig fiilada xasaasiga ah ee xasaasiga ah waxay muujineysaa waxqabad weyn oo ku saabsan adkeysiga. Xirmada kartoonka K = K waxay ku siineysaa ilaalin badan waxyaabahaaga. Isku xiraha isku xiraha ST ilaa ST Jaakada OD 1.2 / 1.6 / 2.0 / 3.0mm Fiber Mode 50 / 125μm OM3 Jaakada Midabka Aqua Nadiifinta UPC ilaa UPC Jaakada Waxyaabaha PVC (OFNR), OFNP, LSZH Galinta ...
Hangzhou Zongju Qalabka indhaha Co., Ltd.